Kusimaha Taliyaha NISA oo sheegay in guul ugu soo dhamaatay dabaal dagyadii Sanad guuurada 48aad. – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Kusimaha Taliyaha NISA oo sheegay in guul ugu soo dhamaatay dabaal dagyadii Sanad guuurada 48aad.
Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa u dabaal degtay 08 01 2018 oo ku beegneyd 48 guuradii ka soo wareegatay markii la aas aasay 8-dii Janaayo 1970-kii.
← Madaxweyne Farmaajo oo ku sii jeeda maanta magaalada Boosaaso.
Maxaa ka soo bixi kara baaritaanka caafimaadka Trump? →